Cisbitaalka ATU-Daryeel Oo Soo Gebo-gabeeyey Adeeg Caafimaad Oo Ay Ka Faa’iideysteen Shan Boqol Oo Qof | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Cisbitaalka ATU-Daryeel Oo Soo Gebo-gabeeyey Adeeg Caafimaad Oo Ay Ka Faa’iideysteen Shan Boqol Oo Qof
May 3, 2017 - Written by Mustafe Faro
Hargeysa (Hubaal)- Cisbitaalka ATU-Daryeel ee magaaladda Hargeisa, ayaa soo gabagabeeyay adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah, oo socday muddo laba maalmood ah oo ka faa’iidaysteen in ka badan 500 oo qof. Dadkaas oo u badnaa dumar iyo carruur ku dhaqan degmadda Gacan-libaax, gaar ahaan xaafaddaha Magaalo Ugaaso, Magaalo Jimcaale iyo Dab-la-taagay. Waxa sidoo kale loo qaybiyay qaybiyay daawooyin iyo agabka nadaafadda. Adeegyaddan caafimaad ayaa ay ka qayb-qaadanayeen ardaydda dhigata Jaamacadda Abaarso Tech oo uu cisbitaalku hoos yimaado, iyagoo kaashanaya dhakhaatiirta ka hawlgali doonta cisbitaalka oo dhawaan la furi doono.
Waxa ugu horrayn halkaasi ka hadlay Agaasimaha Cisbitaalka ATU-Daryeel Hospital oo ka warbixiyay adeegyaddan ay u fidinayaan dadweynaha xaafadda ku dhaqan, kuwaas oo ay ku sheegay inay ka mid tahay hadafkooda inay dadka jilicdansan ay had iyo jeer garab istaagaan. Waxaanu sheegay inuu cisbitaalku uu dhawaan si rasmi ah u hawlgali doono.